Nke a ga-abụ Google Pixel 4a XL. Ọ ga-ahụ ìhè na June? | Gam akporosis
Nke a ga-abụ Google Pixel 4a XL. Ọ ga-ahụ ìhè na June?
A izu ole na ole gara aga asịrị malitere ụda banyere ekwe omume kagbuo nke Google Pixel 4a XL. Ọ bụkwa na, ọrịa na-efe efe nke anyị na-ahụ n'ụwa niile emeela ka oge gbuo ọtụtụ, gụnyere nke Google Pixel 4a. Mana ọ dị ka ihu ọma ha bụ nke ahụ, asịrị.
Karịa ihe ọ bụla n'ihi na ihe oyiyi mbụ agbaala ebe anyị nwere ike ịhụ ihe nhazi nke Google Pixel 4a XL ga-adị, na-ahapụ ụfọdụ nkọwa na-adọrọ mmasị. Ka anyị lee nkọwa niile.
Nke a ga-abụ nhazi nke Google Pixel 4a XL
Kwuo na anyị na-eche ihu ehi mmiri, yabụ ị ga-eji ozi ahụ were ozi ahụ. Mana ịhụ isi mmalite nke ihe oyiyi ndị a, ọ dị mkpa inye eziokwu zuru oke na ihe nlereanya a ga-abụ Google Pixel 4a XL. Na, site na ihe anyị nwere ike ịhụ, enwere ihe ịtụnanya ole na ole iji lezie anya. Nke kacha dị ịrịba ama? The perforated ihuenyo na elu akuku ụlọ n'ihu igwefoto.
N'aka nke ọzọ, ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ ọ ga-azọ na ogwe ọzọ OLED iji weta Google Pixel 4a XL na ndu, huu oke onyonyo. Leziekwa anya, ọ ga-abịa na isi okwu isi, nkọwa nke ga-atọ ndị ọrụ na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ụdị wired. Na mgbakwunye, oleekwa otu ọ ga - esi bụrụ na uzọ ndị a, ọ ga - enwe eriri USB Type C.
Anyị na-ahụ ihe zuru ezu nke Google Pixel 4a XL imewe, dị ka SIM atẹ dị n'akụkụ aka ekpe, na mgbakwunye na sistemụ igwefoto ya abụọ na azụ, ihe tụrụ anyị n'anya nke ukwuu na ekwentị nwere njirimara ndị a. Ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na onye nrụpụta mechara kagbuo ihe nlere a, mana anyị nwere olile anya na ọ bụghị ebe ọ bụ ụzọ maka ụzọ isi bụrụ nhọrọ dị mma ịtụle n'etiti etiti.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nke a ga-abụ Google Pixel 4a XL. Ọ ga-ahụ ìhè na June?
Mana amara ya na akagbuola ya. Agaghị enwe ụdị XL
Ndị a bụ ihe kpatara na anyị anaghị enyocha ụfọdụ egwuregwu na Androidsis
Etu esi agbanye ekwentị gị Smart TV site na Chromecast